Ifomu Lokuxhumana leWordPress nge-Spam Protection Version 2.0.0 Ikhishwe! | Martech Zone
Ifomu Lokuxhumana leWordPress nge-Spam Protection Version 2.0.0 Ikhishwe!
ISonto, May 6, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: Ngingancoma kakhulu Amafomu eGravity kusuka kuRocketGenius ukuhlanganiswa okuqinile kwefomu neWordPress!
Ngamazwana angaphezu kwe-140, ifomu lokuxhumana leWordPress nge Spam Protection kube, kude kakhulu, i-plugin ethandwa kakhulu engisizile ukuyithuthukisa. Kulandwe amashumi ezinkulungwane zezikhathi futhi okuthunyelwe kuyindawo engithandwa kakhulu yiwebhusayithi yami. Ngithole impendulo eningi ku-plugin futhi ekugcineni nginqume ukuyisebenzisa, ngiyihlanganisa konke izincomo abafundi bami ababenazo!
Nazi ezinye zezici:
Amandla wokwakha uhlu lokwehliswa kwesihloko.
Amandla okwenza inselelo iphendule icala elizwelayo noma cha.
Ukuthuthuka okungeziwe ukuvimba amathegi weskripthi ekuhlolweni kumasimu adlulisiwe.
Amandla wokusetha umugqa wesihloko ozenzakalelayo noma uvumele umsebenzisi ukuthi azenzele owabo.
Isitayela esihle esinezinkambu ezigqanyisiwe.
Uma uthuthukela kule nguqulo (2.0.0), sicela wazi ukuthi kuzodingeka ushintshe ikhodi ekhasini lakho lokuxhumana elifakazela ikhodi. Bekukade kungamazwana futhi manje kuyintambo evamile yokufaka esikhundleni.
Iya ekhasini leProjekthi ukuthola imininingwane eyengeziwe kanye nesixhumanisi sokulanda!
Ideski Losizo LangeNkathi Ephakathi
Ukwamukelwa kwamanye amazwe, ukwenziwa kwendawo, ukufaka ikhodi, i-Iceland nokuhunyushwa kwewebhusayithi yekati laseJapan
May 6, 2007 ku-8: 29 PM
Umsebenzi omuhle, Ngokuqinisekile ngizosebenzisa lokhu kusayithi lami elisha engilikhulayo manje.
May 6, 2007 ku-9: 15 PM
Ngiyabonga Wes! Kungithathe izinyanga ezimbalwa ukuthola umsebenzi ebengidinga ukuwenza nale plugin. Ngiyethemba ukulenza likhulume izilimi eziningi futhi ngingeze ukwenza ngezifiso okwengeziwe kwesitayela ngokuzayo… bengifuna ukuyikhipha manje manje, noma kunjalo!
May 6, 2007 ku-11: 41 PM
Bengisebenzisa i-iFrames namanye amafomu we-HTML ngaphambi kwalokhu. Futhi manje ngicabanga ukuthi ngizozama lolu hlelo lwefomu manje.
May 7, 2007 ku-8: 48 AM
Ukuthuthukiswa okumangalisayo! Ngingahle ngithuthukise wonke amafomu wami wokuxhumana we-WP akhona nalena. Imigqa yezihloko ezingokwezifiso iyisengezo esihle.
Ngizoyengeza futhi kuhlu lwe-plugin ku-wpZipper.
Ungahle ucabangele ukuyinika igama elisha, ukuze abantu bakwazi ukulihlukanisa kangcono nama-plugin (ama) amaFomu Wokuxhumana wangaphambilini.
UKarl Ukuxhumana? (Ngamelana nokusetshenziswa ko “K” ophindwe kabili)
May 7, 2007 ku-9: 59 AM
Ngicabanga ukuthi ukushintsha igama kuleli phuzu kungaba umbono omubi - ilandwe amashumi ezinkulungwane zezikhathi futhi, kude, yikhasi lami elisebenza kakhulu. Futhi… ukuqamba igama, "Ifomu Lokuxhumana leWordPress Ngokuvikelwa Kogaxekile", kunenani elibalulekile le-SEO. 🙂
May 7, 2007 ku-8: 19 PM
Ah, bengingacabangi nangomlando i-plugin yakho enayo. Yebo, ukushintsha igama kuzwakala njengomqondo omubi emcabangweni wesibili.
May 7, 2007 ku-8: 12 AM
Sawubona Douglas, angikakayisebenzisi le plugin okwamanje, kepha ngingayisebenzisa kuma-blog wami kungekudala.
Empeleni bengingazi nokuthi ubuhlakulela lolu hlobo lwezinto, mhlawumbe kufanele ngime kaningi.
Kepha, futhi, bengifuna ukudlula phansi ngithi sawubona. Kubukeka sengathi kuyinyanga noma ngaphezulu njengoba ngingashongo.
May 7, 2007 ku-8: 20 AM
Siyakwamukela futhi futhi ngingathanda ukuthi ungene kaningi. 🙂
Ungahlola wonke amaphrojekthi wentuthuko kufayela lami le- Ikhasi Lephrojekthi. Ngithole namanye amawebhusayithi ambalwa asathuthukiswa okufanele enze okuhle!
May 7, 2007 ku-1: 55 PM
UDouglas, lokho kuzamazama. Ngiyabonga kakhulu ngokwenza i-plugin enhle kangangoba sengivele ngithole ilusizo kusayithi engiyenzele inzuzo futhi ngicabanga ukuthi ngizophinda ngithole usizo kusayithi engiyenzela umlamu wami ongumculi .
May 7, 2007 ku-3: 56 PM
Uyabheja, John! Siyabonga ngamazwana anomusa. Uma ungacabanga ngezinye izici ezingeziwe, unganqikazi ukungilahla umugqa.
May 7, 2007 ku-1: 15 PM
Umsebenzi omuhle uDoug. Ngibe nenkinga kancane yokwenza lokhu kusebenze ekuqaleni, kepha ngithole ukusula ikhasi lami lakudala lokudala futhi ukudala okusha kwenze iqhinga.
May 7, 2007 ku-3: 57 PM
Ngiyabonga Dean. Ngibe nenkinga nge-WP-Cache ngokuqhubeka ngiyilondoloze noma ngabe kunjani. Ngilimaze ukuyicisha ngaze ngathola ikhasi lapho bengilidinga khona bese ngiphinda ngivula isikhashana.
May 8, 2007 ku-3: 10 PM
Umsebenzi omuhle futhi uDoug! Ifomu lokuxhumana libukeka lilihle kakhulu, ngihlela ukulifaka kusayithi lami ngokushesha nje lapho ngithola imizuzu embalwa eyengeziwe…
May 10, 2007 ku-7: 43 PM
Uhlala uzinika isikhathi sokubhala okuthile okuhle! Ngiyakwazisa ngempela!
May 10, 2007 ku-8: 02 PM
Akunankinga uDoug - uhlala wenza umsebenzi omuhle kule bhulogi, ngakho-ke wenza kube lula ukuba nokuthile okuhle ongakusho 🙂
May 15, 2007 ku-8: 55 AM
Kulungile, ngisebenzisa lokhu ku isiza sami, futhi yi-rad. Lokho ebengikudinga, futhi okungcono. Siyabonga ngokwenza ifomu lokuxhumana eliphelele le-WordPress !!
May 15, 2007 ku-9: 12 AM
Uyabheja, Shawn! Ukwenza ngokwezifiso okuningi okuzayo! Ikhono lokungeza imibuzo eyengeziwe nokwenza ngezifiso ukwakheka nezitayela!
May 17, 2007 ku-11: 01 AM
Into eyodwa engingathanda ukuyazi: wenza kanjani ukuthi imibono yakho isebenze kanjena? Ngingathanda ukukwazi ukuthola ithuba lokuphendula imibono, njll. Kubukeka kukuhle.
May 17, 2007 ku-11: 16 AM
Shawn, leyo impendulo eyizigidi zamadola! Ngempela ngibhale abantu abahle e-Akismet ngababuza ukuthi bangathanda yini ukusebenza nami ukudala lokhu ukuphawula futhi abazwanga benomdlandla ngakho.
Kodwa-ke, i-WordPress 2.2 inamandla amasha we-hook hook yamazwana ngakho-ke kungenzeka ukuthi i-plugin idalwe. Ngizokwenza ukumba ngibone!
May 18, 2007 ku-4: 06 AM
UDouglas, wazi kanjani ukuthi usuku lwami lokuzalwa luyeza?!?
Lokhu kuyamangalisa! I-Plugin Engcono Kakhulu! Futhi lapho bengicabanga ukuthi ngeke kube ngcono! 🙂
May 18, 2007 ku-6: 13 AM
Usuku lokuzalwa oluhle, Joni! Ngiyajabula ukukuzwa. Okuningi okuzayo! Qiniseka ukuthi hlola amanye amaphrojekthi wami!
Jun 4, 2007 ku-9: 50 PM
Ngingeze ukukhishwa okusha kusihlwa ngebhokisi lokuhlola ongazikhethela ukuzikopisha kulokho okuthunyelwe.
Jun 7, 2007 ku-1: 49 PM
Sawubona Doug- Impela sekuyisikhashana. Ngigijimele kule plugin ngenkathi ngisesha. Umsebenzi omuhle kuwo.
Umbuzo: ulengeza kanjani uhlu olwehlayo njengoba ushilo? ngabe kufanele singene ekhasini lethu lokuxhumana bese sengeza nje '(Inketho A | Inketho B | njll…)? Kubonakala kungangisebenzeli kahle. Ngokusobala kukhona engikuphuthelayo.
Jun 7, 2007 ku-2: 05 PM
Lokho kuyisici sokukhishwa kwakamuva, uDean. Uma une-releast yakamuva - yebo, ungamane ungeze izifundo zakho bese uzinciphise usebenzisa iPipe.
Jul 3, 2007 ngo-2: 48 PM
kungenzeka yini 'ukukhumula' le plugin ukuze ifundwe kalula njenge:
'I-EMAIL YAKHO: [ibhokisi lokufaka umbhalo] [inkinobho yokuhambisa]' ?????
silula. futhi umsebenzisi ufaka i-imeyili yakhe kulelo bhokisi, bese ithunyelwa kwelinye lama-imeyili ethu, ukuze umsebenzisi ajoyine uhlu lwama-imeyili (esilufaka ngesandla).
ngabe lokhu kukude kakhulu endleleni yokusebenzisa i-plugin ye-WP ngomsebenzi olula?
futhi, ngemuva kokuthi othile ehlasele inkinobho ethi 'faka' yiliphi ikhasi abathathwa kulo? noma ingabe iqinisekisa ukuhanjiswa?
Jabulela usizo lwakho!
Jul 3, 2007 ngo-8: 34 PM
Ngicabanga ukuthi uthathe indawo yangakwesobunxele kwenye indawo… lokhu akuyona i-plugin yokubhaliselwe ye-imeyili, yiplugin yekhasi lokuxhumana. Ngingathanda ithuluzi lokubhalisa le-imeyili, ngincoma i-Feedburner.
Jul 24, 2007 ku-1: 36 AM
I-Thanx yaleyo plugin enhle. Ingabe eyokugcina. Ungayibona isebenza esizeni sami futhi. Kwehliswe umthwalo omningi wogaxekile.
Sep 4, 2007 ku-9: 50 AM
Sawubona, bengilokhu ngifuna ifomu lokuphawula lesayithi elisekelwe kumakhasimende elisebenzisa amagama. Bangathanda ukuba namafomu amabili amaqembu amabili ahlukene asebenzisa isiza.
Ngabe lokhu kungenzeka nge-plugin yakho?
Sep 8, 2007 ku-8: 04 AM
Kubuyekezwe ku-2.0.7 namuhla. Le nguqulo isebenzisa i-wp_mail - ushintsho olukhulu ngenxa ye I-Callum Macdonald. Okwenu nonke bantu enibe nezinkinga ngeposi elisebenza nomphathi wenu - lokhu kufanele kwenziwe ubuqili!
I-Oct 7, i-2007 ku-1: i-38 PM
Ngingathanda ukusebenzisa amafomu amabili kuwebhusayithi eyodwa, kungenzeka lokhu?